Home/Finance/6 Waxyaabo aadan ka ogeyn Ganacsatada Forex 2021
Maxay ku saabsan tahay ganacsatada Forex ee midhaha leh ee ka soocaya inta kale?
Muuqaal caan ku ah adduunka Forex ayaa ah in 90% ganacsatada tafaariiqda Forex aysan guuleysan. Qayb yar oo ka mid ah qaybinta ayaa sheegta heerarka niyadjabka sida ugu sareysa 95%.
Iyadoo aan loo eegin tirada dhabta ah, anigoo lashaqaystay ganacsato badan oo forex ah muddada dheer, waxaan kuu muujin karaa in tirooyinkaas aan fogayn.
Marka ma waxay noqon kartaa tan kala dhigaysa 5-10% kala sooc?
Dhamaanteen waan maqalnay sababaha guud sida aragtida, xakamaynta, iyo habka. In kasta oo ay kuwani sababo noqon karaan, haddana waxaa jira waxyaabo kale oo is-khilaafsan oo khiyaano badan.
Walaaca koowaad waa kan.
Ganacsatada Forex ee wax ku oolka ah waxay u maleynayaan inay si gaar ah uga duwan yihiin inta kale. Kama walwalsan yihiin inay u baahan yihiin heer guul sare ah ama isku dayaan inay is dhaafsadaan maalin kasta, iyagoo tixgelin yar siinaya xaaladaha dhaqaale.
Mashruucan, waxaan ku soo bandhigi doonaa lix ka mid ah sifooyinka ugu sarreeya ee ganacsatada ‘Forex’. Waxa soo socda ayaa ah isku-darka jimicsiyo aan bartay tan iyo markii aan bilaabay is-weydaarsiga 2002.
Waa maxay muhiimadda halkan in lagu guuleysto?
Kahor intaanan guda galin lixda dhibco, waxaan u baahanahay inaan sharaxo sida aan ugu sifoobi doono guul gaarista qodobkaan.
Qiso kasta oo ku saabsan ganacsade Forex saamayn leh waa inuu ku daraa faa’iidooyin lagu kalsoonaan karo. Xaqiiqdii waxaan qiyaasayaa inaan dhamaanteen awoodno inaan isku qancino in ganacsatada ganacsatada badankood ay adeegsadaan adeegyo si loo qiyaaso waxqabadka.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, ku guuleysiga hawl kasta waxay ku saabsan tahay wax aan ahayn lacag caddaan ah. Waxa intaa dheer oo ku saabsan farxadda iyo xamaasadda ay noloshaada ku kordhinayso.
Tani waa hal shey oo aan wax bari karin. Waxaan ku deeqi karaa caawinta si aan u sawiro heerarka muhiimka ah, go’aaminta awooda qaabka iyo calaamadaha dhaqdhaqaaqa qiimaha. Si kastaba ha noqotee, ma bari karo xiisaha.
Ama waad jeceshahay inaad wax isdhaafsato, ama maya. Dhex ma leh. Marka weydiintu waa haddii aadan lahayn xamaasad isweydaarsiga, runti ma noqon kartaa mid miro dhal ah?
Tixgeli taas si kooban. Haddii aadan qadarin waxa aad sameyneyso maalin kasta, qiyaas kasta oo lacag ah ayaa kaa dhigi karta mid ku qanacsan?
Waxaan ku doodi lahaa inaysan awoodin.
Marka intaad fahansan tahay boostada hadda jirta, xusuusnow inaysan ku saabsaneyn lacagta caddaanka ah. Haddii is-weydaarsigaaga caddeynta keliya uu keeno lacag, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad mar kale ku jaleecdo xirfadda aad dooratay.
Waa mashquulnimadaada isweydaarsiga, ma ahan lacag caddaan ah, taas ayaa kugu riixi doonta waqtiyada adag. Adigoon xamaasad iyo cibaado isweydaarsiga lahayn, cabir lacageed kaaama dhigi karo saameyn ganacsi Forex.
Yey Yihiin Ganacsatada Ugu Fiican Adduunka?
Stanley Druckenmiller ilaa wakhti aad u fog ayuu ka fikirayay George Soros, oo ah haggiisa.
Runtii, labaduba waxay iskaashi ka sameeyeen Quantum Fund muddo ka badan toban sano.
Intii lagu guda jiray isweydaarsiga Soros ee ‘Black Wednesday’, wuxuu xitaa joogay markii ay “gubeen dhammaan ilihii England laga heli jiray” markay ka gaabinayeen lacagta Ingiriiska sanadkii 1992.
Kooxda ayaa loo maleynayay inay ka heleen wax ka badan $ 1 bilyan oo faa’iidooyin ah isweydaarsiga keliya.
Stanley Druckenmiller wuxuu ka tagay Sanduuqa Quantum si uu u bilaabo hantidiisa, Duquesne Capital.
Maareynta Raasumaalka Duquesne ayaa caan ku ah soo dhajinta celceliska celceliska sanadkiiba ee boqolkiiba 30 iyadoo aan lumin sanad.
Si kastaba ha noqotee, Stanley wuxuu doortay inuu xiro hantida Ogosto 18, 2010.
Waxa uu muujiyay in “dhammaantiin baaxadda leh” ee lacagta caddaanka ahi ay adkaysay in loo abuuro faa iidooyin aad u badan kuwa dhaqaalaha taageera.
Bill Lipschutz (ganacsade Mareykan ah)
Wuxuu caan ku yahay inuu u beddelo $ 12,000 oo ah lacag caddaan ah dhaxal ahaan $ 250,000 inta uu weli dugsiga ku jiro.
Wuxuu tan ku sameeyay adoo gelinaya raasumaalka halista ah tamartiisa dheeraadka ah.
Si kastaba ha noqotee, cidina ma weyna, Billna kiis gaar ah ma ahan.
Muddo aan badnayn ka dib markii uu $ 12,000 u beddelay $ 250,000, wuxuu ku degay hal dookh oo aad u xun oo ugu dhowaad isaga ku kiciyey rikoodhka oo dhan. Wuu bilaabay.
Hase yeeshe, halkii uu ka saari lahaa, wuxuu u adeegsaday nasiib darradaas inuu ku xoojiyo tamarkiisa waxbarashada.
Lipschutz wuxuu ku biiray Salomon Brothers sanadkii 1984 isagoo qayb ka ahaa waaxda sarifka lacagaha qalaad ee dhowaan la sameeyay.
Hal sano kadib, wuxuu usameynayay $ 300 milyan sanad walba shirkadda.
Waa kuwan afar aasaasi oo muhiim ah oo ka yimid Bill Lipschutz laftiisa:
Waqtigu waa qodob khatar ah. Saddex ilaa hal magdhaw oo u dhigma halista ayaa u dhiganta 48 saacadood ama ka yar, hase yeeshe isweydaarsiga dheeriga ah ee dheereeya wuxuu u baahan yahay shan illaa hal dheelitir.
Ciyaartu waa “sheyga.” Sida ku cad Sharciga, ganacsade miro dhal ah waa in lagu daraa oo la isweydaarsadaa; lacag caddaan ah waa arrinta dhinaca.
Ogow cadaabka; si kastaba ha ahaatee, ha ka baqin. Way fiicnaan laheyd haddii aad dareento murugada isweydaarsiga xun ama ganacsi ka baxsan saldhigga. Adoo u malaynaya inaadan samayn oo aad kabuub tahay, way dhammaatay.
Xarunta waalan waa lama huraan lama huraan ah! Bill Lipschutz mar uu sharraxay, “markay kuugu yeeraan waalli, waxaad ogaataa inaad xaalad wanaagsan ku jirto. Wuxuu ula jeeday dabeecadda shaqada adag iyo xarunta waalida ah ee looga baahan yahay inay ku guuleysato ganacsade Forex.
Tan iyo markii aan daboolnay qayb ka mid ah ganacsatada ugu fiican adduunka ee Forex, waa inaan baaro lixda tilmaam ee ay wadaagaan.
1. Ma ‘Waayaan.
Kahor inta aysan fariimadu bilaaban inay soo daadato, aan cadeeyo. Ma jiro ganacsade Forex nasiib darro la’aan. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaa jira farqi gaar ah oo u dhexeeya sida ganacsadaha bilaabayaa u khasaaray iyo sida ganacsatada ugu fiican ee Forex u lumiyaan.
Waa maxay kala sooca? Aragtida
Guud ahaan, laga bilaabo suuqa Forex waxay u arkaan luminta inay tahay wax xun. Waa hab lagu muujiyo inay wax khaldan ku dhammaystireen.
Read more: Ereyo Jaceyl Oo Romantic Ah
Intaa waxaa sii dheer, in wax si khaldan loo gaarsiiyo waa wax laga naxo heer kasta oo ay ahaato; taasi waa waxa aan u aqbalnay nolosheena oo dhan.
Si kastaba ha noqotee, ganacsadaha saamaynta leh uma arko nasiib xumo inay tahay wax “xun”.
Sidoo kale maahan wax suuqa kugu sameeyay. Suuqa Forex ma lahan tilmaan meesha aad ka soo gashay ama halkaad ka heshay dalabkaaga joojinta-nasiib darrada ah.
Si ka duwan adiga, suuqa waa mid dhexdhexaad ah. Marka markaad guul darreysato, waa su’aal ka fikiraysa wixii aad horumar ku sameyn lahayd.
Isku day inaadan qalad ii fahmin; cidina kuma booddo fursad ay ku aragto khilaaf isweydaarsi iyaga ka dhan ah. Waxba kama aan qabsan karin haddii aad isweydaarsato hal bil ama toban sano. Xaalad kasta way ka raalli tahay in lacag caddaan ah la keeno intii laga khasaari lahaa.
Taas ayaa la dhahay, maxaa yeelay isweydaarsigu si fiican ugama muuqdo adiga macnaheedu maaha inaad ka fikirto macno ahaan. Jaantuskan habkani wuxuu kuu cuni doonaa furitaan aad u qoto dheer.
Ganacsatada Forex ee saameynta leh waxay leeyihiin aragti ah in nasiib-darrada ay tahay uun wax soo galin.
Waa habka suuqa ee lagu burinayo is-dhaafsiga. Taasi waa waxa kali ah ee suuqa Forex uu sameyn karo maxaa yeelay waxba kaa ma oga adiga iyo goorta aad suuqa soo gashay, mana siinayso fikir labaad.
Dhibaatooyinku waxay noqon karaan hab fiican oo wax lagu barto. Xusuusnow in xitaa isweydaarsiga u kacaya sida nasiib darrada uu noqon karo doorashada saxda ah.
Sidee taasi noqon kartaa, waad weyddiinaysaa?
Jaaniskii ka baxsanaa ee aad ku qeexday cirifkaaga iyo nidaamku wuxuu la kulmay dhammaan heerarkaaga si aad suuqa u gasho, xilligaas, waxaad sameysay wax walba oo aad sameyn kartid.
Halka inta soo hartay ay u taallo suuqa, dhowr maalmoodna, suuqa wax wada shaqeyn ah lama yeelan.
Marka xigta ee aad nasiib darro ku dhacdo, u aqbal jawaab celin waxtar leh. Falanqee duruufaha si aad u ogaato sida aad u horumarin karto waqtiga soo socda.
Xusuusnow, si kastaba ha noqotee, in xitaa nidaamka A + uusan guud ahaan shaqeyn.
Waxaan soo maray qabanqaabooyin badan oo is dhaafsi ah oo aan shaqeyn oo aan si fudud ugu baahanahay toddobaad kasta.
Taasi waa sababta oo ah waxaan garwaaqsaday in geeskaygu uu ka adkaan doono waqtiga oo lacag caddaan ah uu gelin doono diiwaankeyga.
Xaqiiqdii, jimicsi hufan ka dib isweydaarsiga luminta ayaa ah inaad isweydiiso, “miyaan dib u qabsan doonaa qaabkan u dhigma toddobaad ka dib haddii ay iskeed isu keento?”
Waa inaad si isdaba joog ah u haysataa ikhtiyaar aad kaga jawaabto weyddiintan dib-u-celin.
Haddii haba yaraatee aad ugu jawaabto “maya,” waxaad u baahan tahay inaad dib u socod ka sameyso, oo aad ogaatid halka ay wax xumaadeen, oo aad ku saxdid sarrifka soo socda.
Bilaw inaad ka fikirto isweydaarsiga inaad noqoto ganacsi ganacsi halkii aad ka ahaan lahayd dhacdooyin dhib badan. Nasiib darro kasta waxay dan u tahay ganacsigaaga is-weydaarsiga iyo ugu dambeyn tababarkaaga is-dhaafsiga.
Lacagta kaashka ah ee aad gelisay khatarta ku jirta isweydaarsiga aan kala sooca lahayn, iyadoon loo eegin inay tahay $ 5 ama $ 500, waa hawlgal lala socdo hagaha ugu fiican ee Forex meeraha — suuqa. Hayso aragti soo dhaweyn leh, waxayna ku tusi doontaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato oo dhan.
2. Waxay Adeegsadaan Ficil Qiime
Ganacsade kasta oo Forex ah oo midho leh oo aan la kulmay wuxuu u adeegsadaa ficil qiimo ah qaab, qaab, ama qaab dhismeed.
Tani macnaheedu maahan inay si isku mid ah uga faa’iideysanayaan waxqabadka qiimaha leh; waxay u isticmaalaan xoogaa waxqabad qiime ahaan qayb ka mid ah habka isweydaarsigooda.
Iyadoo aan loo eegin haddii dillaalku ka faa’iideysto waxqabadka qiimaha cayriin ama uu u adeegsado si uu u aqoonsado heerarka muhiimka ah ee fiirinta, dhaqdhaqaaqa waxqabadku wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa farsamo kasta.
Taasi waa sababta oo ah waxay buuxinaysaa sida sawirka sayniska maskaxda gudaha suuqa. Waxay ina siineysaa xoogaa aqoon ah oo ku saabsan shakhsiyaadka ganacsatada kala duwan.
Inaad xoogaa ka fikirto halka amarada iyo iibinta ay ku yaalliin suuqa ayaa asal ahaan u rogaya ganacsigii ugu fiicnaa Forex ee aad noqon karto.
Waxay xoojin kartaa nidaam kasta oo wax isdhaafsi ah iyadoo la siinayo gobollada inay daawadaan qaybaha laga yaabo inay ka faa’iidaystaan ​​bartilmaameedyada.
Isdhaafsiga Forex iyada oo aan la adeegsan waxqabad qiimo leh waxay u egtahay isku dayga wadista gaari iyadoo hal isha la xiray. Si aad u wanaagsan ayaa la samayn karaa; si kastaba ha ahaatee, anigu ma soo jeedin lahaa.
Marka iyadoon loo eegin inaad abuureysid istiraatiijiyad ku tiirsan tilmaamayaasha, caqliga wanaagsan ayaa kugu hagaya inaad ka ogaato waxqabadka qiimaha.
Xaaladda wax kale, waxay ku siin doontaa aasaas adag oo aad ka qorsheysan karto oo aad ku kobcin karto habab kala duwan.
3. Ganacsatada Forex ee wax ku oolka ah Ha isku dayin Si Adag
4. Waxay Ku Fikiraan Shuruudaha Khatarta
5. Uma Baahan Lacagta
6. Ganacsatada Forex ee Midhaha leh Ayaa Yaqaana Goorta Ay Socodka Ka Baxayaan
Previous Calaamadaha jaceylka dhabta ah.
Next Tushka Daanka Sidaan Kusameeso
A business degree is perhaps the most flexible and extensively appropriate sort of capacity open, …